musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Palestine Kuputsa Nhau » Palestine kushanya kwakarasikirwa pamusoro pe $ 1 bhiriyoni nekuda kwedenda
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Israel Breaking News • nhau • Palestine Kuputsa Nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Kunyangwe hazvo hurumende yePalestine yakarerutsa matanho ayo ekudzivirira pamwe nekurambidza kurwisa coronavirus, uye ikabvumidza zvikamu zvese kuti zviite zvakajairika, chikamu chekushanya, kunyanya muBheterehema, chiri kutambura.
Chikamu chekushanyirwa muPalestine Territories chinoramba chichidzikira nekuda kwe COVID-19 denda.
77.2 muzana yevaenzi vehotera muWest Bank ndeveIsrael-maArabhu, 22.5 muzana vagari veWest Bank uye chete 0.3 muzana vashanyi vanobva kunze kwenyika.
Matunhu ePalestine ane nzvimbo mbiri dzakasiyana: West Bank (kusanganisira East Jerusarema) neGaza Strip.
Chiremera chePalestine World Tourism Day mushumo, chakaburitswa nhasi, chakati chikamu chekushanyirwa chePalestine chakarasikirwa nemadhora bhiriyoni kubva pakatanga chirwere checoronavirus mudunhu rePalestine.
Chirevo ichi, chakaburitswa pamwe chete nePalestine Central Bureau ye Statistics uye nebazi rezvekushanyirwa uye zvekare, zvakawedzera kuti mashandiro enzvimbo yekushanya muPalestine inoramba ichidzikira nekuda kwe COVID-19, kunyanya muWest Bank guta reBheterehema.
Sekureva kweshumo, 77.2 muzana yevaenzi vehotera muWest Bank ndeveIsrael-maArabhu, 22.5 muzana vagari veWest Bank uye chete 0.3 muzana kubva kunze kwenyika.
"Kunyangwe hurumende yePalestine yarerutsa matanho ekudzivirira uye kurambidza kurwisa coronavirus, uye ikabvumidza zvikamu zvese kuti zviite zvakajairika, chikamu chekushanya, kunyanya muBethlehem, chichiri kutambura," akadaro mushumo.
The Palestinian Territories ine nzvimbo mbiri dzakasiyana: West Bank (kusanganisira East Jerusarema) uye Gaza Strip.
Tourism mu Palestinian Territories ndiko kushanya muEast Jerusalem, West Bank, uye neGaza Strip. Muna 2010, vanhu vanosvika mamirioni 4.6 vakashanyira matunhu ePalestine, zvichienzaniswa nemamirioni 2.6 muna2009. Pane huwandu uhu, mamirioni 2.2 vaive vashanyi vekunze nepo 2.7 miriyoni vaive vekumba.
Mukota yekupedzisira ya2012 vanopfuura 150,000 vashanyi vakagara mumahotera eWest Bank; 40% vaive vekuEurope uye 9% vaibva kuUnited States neCanada. Magwaro makuru ekufambisa anonyora kuti “West Bank haisiyo nzvimbo yakapusa yekufambisa asi kuedza kwakakomborerwa zvikuru.